inside myanmar | Eleven Broadcasting
Category: inside myanmar
သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
” အချိန်ပေးရတာနဲ့တန်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးတွေကိုပဲ ရိုက်တော့တယ် ” ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
■ ” မိခင်ကျန်မာရေးကြောင့် ဇာတ်ကားရိုက်တာတွေ ကျဲသွားတာပါ ” လို့ ပြောပြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို သူမဘာတွေ ထပ်ပြီးပြောထားသေးလဲ။
Posted in inside myanmar, programLeaveaComment on သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
“ IS IT A MYTH? ” ( ရုပ်သံအစီအစဉ် )
Posted on September 8, 2018 September 8, 2018 by Aung Kyaw Moe
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ သွားတဲ့စနစ်ကနေ IT ဒေတာစနစ်ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ ?
■ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးဖြစ်ဖို့အတွက် IT ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါလဲ ? စတဲ့ IT နည်းပညာရဲ့ အရေးပါမှုတွေကို Melia Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ IS IT A MYTH? ပွဲအခမ်းအနားမှာ အခုလို ပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။
Posted in inside myanmar, programLeaveaComment on “ IS IT A MYTH? ” ( ရုပ်သံအစီအစဉ် )
၀ါးလက်မှု အနုလက်ရာ ( ရုပ်သံအစီအစဉ် )
■ ၀ါးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ၀ါးရေခွက်၊ ၀ါးရေဗူး၊ ၀ါးစုဗူး၊ ၀ါးမီးအိမ် အစရှိတဲ့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေ ထုတ်လုပ်ပုံကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Posted in inside myanmar, newsLeaveaComment on ၀ါးလက်မှု အနုလက်ရာ ( ရုပ်သံအစီအစဉ် )
Posted on August 31, 2018 August 31, 2018 by Aung Kyaw Moe
■ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မင်းသမီးကြီး ရှုမ၀စမ်းစမ်းအေးရဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ပရိသတ်တွေ အလွမ်းပြေကြည့်ရှူ့နိုင်စေဖို့အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in inside myanmar, newsLeaveaComment on အမှတ်တရများနှင့်အနုပညာရှင် (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
Essential Tips For Travelling ( ရုပ်သံအစီအစဉ် )
■ ကလောကို Trekking သွားကြစို့
အေးချမ်းလှတဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသ ကလောမြို့လေးရဲ့ လည်ပတ်စရာကောင်းပုံတွေ၊ Trekking သွားလို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဒီတစ်ပတ် Travel Blogger – Khant Htal Shwe Ko (Explore With Khant ) က မျှဝေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ။
Posted in inside myanmar, programLeaveaComment on Essential Tips For Travelling ( ရုပ်သံအစီအစဉ် )
Posted on August 27, 2018 by Aung Kyaw Moe
■ အပြင်မှာ ရည်းစားစကားမပြောဘဲ ရုပ်ရှင်ထဲမှာကျတော့ ပြောတတ်တယ်ဆိုပြီး သဝန်တိုနေတဲ့ ဖိုးသောကြာဇနီးချစ်ဥ ၊ဖေဖေ့ကို အရမ်းချစ်နေတဲ့ သမီးလေးရွှေသု ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ သူတို့မိသားစုလေးအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Posted in inside myanmar, programLeaveaComment on အဆိုတော်သရုပ်ဆောင် ဖိုးသောကြာမိသားစု
“ တယ်လီနော မှ ရေဘေးသင့် ဒေသများအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၅၀ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ ” (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
Posted on August 24, 2018 August 24, 2018 by Aung Kyaw Moe
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေဘေးအန္တရယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ နေရာဒေသတွေအတွက် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့တွေကို တယ်လီနောမြန်မာက ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted in inside myanmar, programLeaveaComment on “ တယ်လီနော မှ ရေဘေးသင့် ဒေသများအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၅၀ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ ” (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
သူတို့ပြောတဲ့ သူတို့အကြောင်း (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
“အနုပညာကို စလုပ်ထဲက မင်းသားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ” ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘိုဘိုရဲ့ အနုပညာလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
Posted in inside myanmar, programLeaveaComment on သူတို့ပြောတဲ့ သူတို့အကြောင်း (ရုပ်သံအစီအစဉ်)